स्वस्थ बच्चा जन्माउन कस्तो खानेकुरा खानुपर्छ गर्भवतीले ? - Jhapa Online
स्वस्थ बच्चा जन्माउन कस्तो खानेकुरा खानुपर्छ गर्भवतीले ?
गर्भावस्थाका दौरान १० देखि १३ किलो तौल बढ्नु पर्छ । हरेक तीन महिनामा एक देखि दुई किलो तौल बढ्नु उपयुक्त मानिन्छ । विज्ञहरु गर्भवती महिलाले दिनहुँ हिडडुल गर्ने र गहिरो श्वास लिने अभ्यास गर्ने सल्लाह दिन्छन् । एजेन्सी